URoberto Segura. I-Biography nabantu abadumile | Izincwadi Zamanje
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 22/08/2021 12:00 | Amahlaya, Umlando wezincwadi
URoberto Segura wayengomunye wabakhulu abadwebi bekhathuni we ubudala begolide bamahlaya eSpain. Sengikushilo vele kwesinye isihloko, kodwa namuhla lokhu ngikunikezela kuwe kuphela. Umdali we URigoberto Picaporte, ibhakede elikhulu o Amakhosi ase-Alcorcón kanye ne-lazon Pepon, ngesikweletu sakhe unabalingiswa abaningi kakhulu kunaleso esineminyaka esiyikhumbula kakhulu. Kukhona okubuyekeza.
Lo mdwebi wekhathuni waseCatalan obunye bobuthakathaka bami kanye no-Ibáñez, u-Escobar, SHELF o IPurita Campos. Wazalelwa ngaphakathi Badalona NgoFebhuwari 14, 1927, wayengumlobi weskripthi nomdwebi wamakhathuni futhi ungowesizukulwane esikhaliphile sabadwebi bakhathuni abangama-57 ababenendlu yokushicilela eyinsumansumane I-Bruguera. Kukulo nyaka lapho edonsa khona amakhava akhe okuqala ngombala futhi egxile ochungechungeni nge izinhlamvu zendabuko nezindikimba, okuveza ngenkathi kugcwalisa umphakathi waseSpain wama-60s nama-70s EzikaMuchamarcha, ukutolikwa kabusha kwakamuva okuhambisana nesikhathi kwamaqembu akhe ajwayelekile wabangane aqala ngawo Iqembu elijabulayo o Igenge.
Kusukela ebizweni lokuqala, eneminyaka engu-14 wayesebhalisile ku I-Barcelona School of Arts and Crafts. Futhi ukusuka lapho, ngemuva kokubambisana okuthile nabezindaba, wangena kwizitudiyo zeMacián, ezazizinikele ekukhiqizeni uchungechunge lekhathuni. Kwakungenalutho oludingekayo ukufika eBruguera, lapho athuthukisa khona umsebenzi wakhe omuhle wokuba ngumdwebi wamakhathuni kanye namagama ahamba phambili futhi amakhulu kakhulu kumahlaya aseSpain.
Engikuthanda kakhulu de Segura kuyinto, ngaphandle kwe- unhlangothi onamandla futhi ozwakalayo emidwebweni yakhe, omkhulu ikhono lokuveza lezo zimo zansuku zonke. Isibonelo, emindenini yamahlaya akhe kwakukhona ubudlelwano obuseduze vele, ukubonakaliswa kwalowo mphakathi ozovele uvule ngentando yeningi esondele kakhulu.
URigoberto Picaporte, ibhakede elikhulu
Es mhlawumbe isimilo sakhe esikhunjulwa kakhulu. Kudalwe ku- 1957, lapho livele khona kumagazini Thumbelina. Engcupheni yokuwela embonweni olula ngenxa yesimo se-protagonist yayo, uSegura wanikeza izinhlamvu nabalingiswa izimo eziningi. Futhi yize eyisiphukuphuku saphakade, njalo lapho sifunda ikhomikhi kaRigoberto sicabanga ukuthi kulokhu kuzomhambela kahle. Isithombe sakhe, leso se-bachelor eneminyaka emaphakathi, osevele esekhulile ukwedlula omncane futhi engathandeki, sithintwa ukubekezela kwakhe ekushadeni kwakhe ingoduso, UWarbler Cencérrez, owayehlale ephethe isibhamu UDona Abelarda, umama wakhe. Futhi-ke, kunjalo, yayingekho indlela.
Kepha uSegura, njengaso sonke leso sizukulwane sabadwebi bekhathuni, bekufanele azinikele kuye uchungechunge oluhlukahlukene ngasikhathi sinye ukuze uziphilise ngokuthula kwengqondo okuthe xaxa. Umzamo ubanikeze ne-a Ukuphathwa okungenakuqhathaniswa kokuhweba. Futhi ezingeni lezikole ezinkulu zaseYurophu, kepha ngaphandle kokuthola ukuqashelwa nodumo olufanayo emhlabeni jikelele.
Amakhosi ase-Alcorcón namavila uPepon
Kuvele ngaphakathi 1959 en Malume Uyaphila futhi bakhunjulwa kakhulu. Kungashiwo ukuthi basesefeshini, ngoba ngubani ongenawo noma owaziyo umlamu onjengaye UPepon? Futhi ngukuthi iPepon iyiphupho elibi le- U-Arturo Alcorcon, isisebenzi sasehhovisi esinezifiso zomphakathi nezobungcweti, okufanele sibhekane naye, i-hobo enobuvila okuthi, ngaphezu kwakho konke ku-Arturo, ivikelwe ngudadewabo, omtotobisayo futhi amvikele ngokweqile.
Kubafundi abasebancane, bekukhona la maqembu wabangani kanye nama-antics abo wobuntwana nentsha uSegura aguqukela kuyo eminyakeni edlule nezimo zenhlalo.
UPiluca, intombazane yesimanje (1959) - lily (1970)
Mhlawumbe engizithandayo, bekuyizidalwa zakhe ezibhekiswe kubabukeli besifazane abafunda omagazini abanjengoLily. Ilandise ukuzidela nokungahambi kahle kwamantombazane amabili anomlingiswa ofanayo nowokulandela umkhondo.
Nabanye abalingiswa babekhonaUCaptain Serafín nomfana wakhe wasekhabini uDiabolín o UPepe Barrena noma ULaurita Bombón, unobhala wezokuqondisa.
Segura ushonile kuPremià de Mar, ngoDisemba 2008.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Amahlaya » URoberto Segura. I-Biography nabantu abadumile